Articles tagged 'zima'
Medical professionals, UZ to meet 5 July 2017 HARARE - The Zimbabwe Medical Association (Zima) will meet University of Zimbabwe (UZ) authorities to discuss planned medical students' tuition fees hikes that have provoked violent protests at campus. Critics say the increase in fees from $700 per semester to $1 500 with effect from 1 August ...
Minister Parirenyatwa fails to break impasse 24 June 2016 HARARE - Health minister David Parirenyatwa has failed to break the impasse between private medical doctors and medical insurers — something that spells doom for Zimbabweans who will now be forced to pay cash up-front when seeking medication. After meeting Parirenyatwa on Monday, the doctors r...
'Take doctors seriously' 21 June 2016 HARARE - President Robert Mugabe and his ministers should take doctors seriously and stop treating them as if there are enemies of the State, chairperson of the parliamentary portfolio committee on Health Ruth Labode has said. Reacting to Mugabe's utterances that doctors should sacrifice their...
Zima fails to give artists trophies 5 June 2016 HARARE - Zimbabwe Music Awards (Zima) is still struggling to honour 2014-2015 winners with their trophies, four months after the event. The seventh Zima edition was held at Harare International Conference Centre (HICC) in February and the event was beamed live on State TV. Winners were supp...
We dropped the ball: Zima 15 March 2016 HARARE - Zimbabwe Music Awards (Zima) chairperson Joseph Nyadzayo has conceded that this year's edition of the gongs was a far cry from the glitz-and-glamour affair they had hoped for. The awards were generally attacked by artistes and music fans alike for lacking both the pomp and organisatio...
Zima must keep promises 11 December 2015 HARARE - The Zimbabwe Music Awards (Zima) ceremony is expected to be held early next year but before then we hope the organisers of the annual event would have delivered on the promises they made at the 2014 edition. Then, under the full glare of the media, Zima gave a house under construction...
Zima in Bob Marley faux pas 7 December 2015 HARARE - Organisers of the Zimbabwe Music Awards (Zima) approached Julian Marley instead of the Bob Marley Foundation over their decision to posthumously honour the late reggae music legend with a Lifetime Achievement Award. Julian, whose mother is Bajan Lucy Pounder, is one of several sons fa...
Now it's my time — Cal_Vin 7 December 2015 BULAWAYO - Receiving a staggering eight Zimbabwe Hip-Hop Awards nominations and another one from the Zimbabwe Music Awards (Zima) has emboldened Bulawayo-born rapper Cal_Vin to declare: Now it's my time! The Luveve-born artiste, who was born Calvin Mgcini Nhliziyo 29 years ago, believes the no...
Zima still to finish Cde Chinx's house 2 December 2015 HARARE - Organisers of the Zimbabwe Music Awards (Zima) have admitted that they were too ambitious when they promised to build a house for Comrade Chinx in less than six months. Zima re-emerged last year after a seven-year hiatus and honoured musician and liberation war hero Dick Chingaira, be...
Marleys to grace Zima 19 November 2015 HARARE - The family of the late reggae legend Bob Marley is expected to grace the Zimbabwe Music Awards (Zima) to be held early next year where the departed Jamaican music star will be posthumously honoured with the Lifetime Achievement Award. [GoogleAd] Zima chairperson Joseph Nyadzayo...
Disappointment at Zima's false start 3 October 2014 HARARE - Organisers of the much anticipated Zimbabwe Music Awards, (Zima) have disappointed multitudes of nominated musicians and their fans who were expecting a fire-up gala tomorrow at the Harare International Conference Centre, HICC. The organisers announced the cancellation just three days...
Music awards must be professional 11 July 2014 HARARE - Following the recent unveiling of award categories by both the revived Zimbabwe Music Awards (Zima) and the newly-created Wene Music Awards, Zimbabwean musicians have every reason to be hopeful that a new positive era is on the brink. Predictably, Zimbabwean musicians will also be hop...
Zim to honour artistes in October 9 July 2014 HARARE - Winners of the revived Zimbabwe Music Awards (Zima), which have bounced back after a seven-year absence, will be announced on October 4, 2014 at the Rainbow Towers in Harare. Organisers of Zima, which is chaired by Joseph Nyadzayo, made the announcement yesterday during a press confer...
Zima to release awards categories 23 June 2014 HARARE - Consultants hired by the re-launched Zimbabwe Music Awards (Zima) say categories for the gongs will be announced within a fortnight. Michelle Fernandes, the events manager of the South African Music Awards (Sama) made the announcement after consultations with Harare-based musicians la...
Zima set to hold stakeholder workshop 18 June 2014 HARARE - Several musicians and journalists are expected to attend a Zimbabwe Music Awards (Zima) stakeholder consultative workshop at the Zimbabwe College of Music tomorrow morning. Zima marketing and communications executive Farai Chapoterera told the Daily News yesterday the workshop would e...